Ungayigcwalisa phi iiferethi zomoya zoPaintball?
Funda indlela yokufumana iiTPA zakho zeTP Paintball ezizalisiweyo
Izibhamu zePaintball zisebenza nge-gas-air-compressed okanye i- CO2- tanks ezizaliswe kwi-3000-4500 psi. Ukuzigcwalisa kufuneka zidinga i-compressors ezinzima zokusebenza kunye nezixhobo. Ngethuba usebenzise umoya ocinezelekileyo ungabonisa ukusebenza kangcono kune CO2, izitolo ezimbalwa zinokukwazi ukuzalisa ngokufanelekileyo iitanki zomoya.
Ibeka ingxaki efanayo kubadlali bepalball. Ungayifumana phi i-tanks yakho ye-high-pressure air (HPA)? Kukho inani lezitolo onokuziphendulela kwixabiso elincinci, okanye unako ukwenza njalo ngokwakho, ngaphandle kokuba ulungele ukuchitha imali.
Iphulo: Ngokomthetho, izitishi zegesi ezizalisiweyo zepalati zepalati azikwazi ukuthunyelwa (ngaphandle kwexesha elilodwa kunye ne-12-gram cartriges). Xa uthengela izixhobo zakho kwi-intanethi, ungalindeli itanki lize lilungele indawo yepalati. Ukuba ucinga ngomoya ocinezelekileyo, jonga kwiitanki zakho zendawo yokuzalisa phambi kokuthenga.
Iintengiso zePaintball kunye neMigudu yokuPhuphisana
Indawo yokuqala yokukhangela itanki yokuzalisa kwisebe yakho yepalati yepalati kunye nenkundla yokhuphiswano. Uninzi lweevenkile kunye neendawo zinezixhobo ezikhuselekileyo zokuzalisa iitanki zomoya ezincinci, kwaye ezinye ziya kuzizalisa mahhala. Nangona kunjalo, unakho ukuhlawula imali ye-$ 1-3 kuyo yonke i-1000 psi.
Ukuba akukho ndawo yepalball okanye igcino kwindawo yakho, jonga malunga nabathandekayo bendawo yokupenda. Abanye abanikazi bamashishini angabandakanyekanga batyalomali kwi-TPA compressors ukuhlangabezana neemfuno zabo. Baya kufuthi bazalise amatanki kwicala lokungenisa imali encinane (kwaye uncede ukuhlawula i sixhobo).
Ukuba ngaba nabathengisi abanjengalokhu bahlala kwindawo yakho, abadlali bakho bepaltiki bangabazi . Iifom yepeyinti ze-paintball nazo zinokukwazi ukukhokelela kwindlela efanelekileyo.
Ekubeni iifaki zomoya ezixinzelelweyo zepalball zisebenza ngxinzelelo olufanayo njengemithonjeni ye-scuba, iivenkile ezininzi zokugcina izitya zizalisa amatanki ebhola.
Kwakhona, kufuneka iindleko ezimbalwa zeedola ukugcwalisa itanki, kwaye enye yezona ndlela zilula.
Gcwalisa iitanki ekhaya
Ukuba unayo itanki ye-scuba, unesiqingatha sokufakela iitanki zakho zepalati ekhaya. Iitanki zesitragi ezizaliswe kwisitolo sakho soshukela sendawo zingakwazi ukugcwalisa kalula iitanki zomoya ezityinwe kwiipalati zepaltiki xa uthengisa isitulo sokuzaliswa kwesitya.
I-tank ye-3000 ye-psi yongxowankulu iya kugcwalisa itanki lomoya elixinyiweyo kwisibhamu se-airball malunga namaxesha angama-15-20.
I-tank ye-scuba iya kubiza ama-dollar ambalwa kwaye kuya kufuneka uyihlawule ukuze uyizalise. Khawuqwalasele oku xa ulinganisa iindlela ozikhethayo. Ukuba uhlala umgama ongathandekiyo kwiivenkile ezizalisa itanki yepalati, ukuthenga nokugcwalisa itanki ye-scuba ingaba yinto efanelekileyo.
Ngaba ucinga ukuthenga i-compressor yomoya ngokwayo? Ngaphandle kokuba usebenza kwintsimi yokhuphiswano lwepalball okanye uvula ivenkile, cinga kwakhona. I-compressors ye-HPA inokuhlawula imali engaphezu kwama-$ 2000 ngokusekwa kwesiseko. Ewe, unako ukuzalisa ezinye iitanks zabantu kunye neetanki ze-scuba, kodwa kubadlali abaninzi bepalball, olu khetho aluphumelele.
Musa ukuzama ukusebenzisa ipompu yakho yamatope okanye umgangatho womoya womoya-nto ayiyi kusebenza. Uninzi lwama-compressors luphuma kuma-180 psi, kwaye iitanki zakho zepalati zifuna ubuncinane be-3000 psi ukuzalisa.
Iingcebiso zokuzalisa iitanki ze-HPA
Kungakhathaliseki ukuba ufumana itanki yakho ephilileyo, kukho izinto ezimbalwa omele uzigcine engqondweni.
Iitampu ze-HPA zinomhla "owenziwe ngamanzi" ezibonisa okokugqibela xa zihlolwe. Zonke iitank kufuneka ziphinde zibuyele emva kweminyaka emihlanu.
Ungalokothi ubeke igrisi okanye ioli kwi-nipple yokuzalisa itanki. Xa ukuzaliswa, ubushushu buya kubakha kwaye bufudumale amafutha afuthayo, ukudala amandla okutsha.
Gcina amathangi akho ngaphandle kwelanga kunye nokuzama ukuphepha ukushiya emotweni eshushu. Kuya kuzo zonke iitanki zepalati: uxinzelelo luyakwakha kwaye luvuthele i-disc crans disc CO2. Nangona iitampu ze-HPA zingenakunyamezela, akulungile ukuba iziqinisekiso zifake iinqanki ukuba ziphephe.
Khusela amathangi akho ngekhava lesitanki okanye into efanayo, njengengxowa yesikhumba.
Xa uzalisa amatanki, kukulungele ukwenza "ukuthoba ngokukhawuleza." Ukuba itanki izaliswe ngokukhawuleza, uya kulahleka ipsi njengoko umoya uhlahlela. Oku kuthetha ukuba itanki yakho ye-psi ye-3000 ingaphela kuphela nge-2500 psi ekupheleni. Ininzi yebhola yepenball kunye nabaqhubi bee-scuba zesitolo bayazi le nto, kodwa kubalulekile ukukhumbula ukuba uzalisa lakho.
Izixhobo eziphambili zePaintball
Indlela yokuthabatha i-Paintball Gun kwi-Airplane ngokusemthethweni
Yintoni Oyaziyo Ngaphambi kokuba Uthenge i-Paintball Gun
Indlela yokugcina iMask yakho yePaintball Ukusuka kwiFogging
Yintoni eyahlukileyo malunga nokuthandana eChina?
Imisedare kunye neJunipers - I-Key Leaf Key
12 Abomculo abaMhlophe abaMnyama abaNinzi Abantu babecinga ukuba babumnyama
Yenza isiJamani ngeemihlambi kunye nezimpendulo zazo
Imfazwe Yehlabathi II: Messerschmitt Me 262
I-Métro, i-boulot, i-dodo-Inkcazelo yesiFrentshi ichazwe
Imfazwe Yehlabathi II: Okokuqala uLieutenant Audie Murphy
Indlela Yokuthi "Sawubona" ​​ngesiTshayina
Imfazwe yaseLigny Ngexesha leMpi yamaNapoleon
Iimbali zeeNtsholongwane zeSizwe
Kutheni Ndibhalile 'Iphephadonga Eliphuzi'
Indlela Yokukhulisa I-Calcium I-Acetate I-Acetate I-Hexahydrate Crystals
Isixazululo sezindlu eziphantsi kweZindleko zokuThuthukiswa kweHaiti